How'd it happen and more reports?: ဇောဂျီဖော့ကို Iphone software iOS 8.1 ကို update လုပ်ပြီး မြန်မာဖော့ကို မမြင်ရသုတွေအတွက်
ဇောဂျီဖော့ကို Iphone software iOS 8.1 ကို update လုပ်ပြီး မြန်မာဖော့ကို မမြင်ရသုတွေအတွက်
iphone, ipad တွေကို iOS 8.1 update လုပ်လုိုက်ရင် မြန်မာစာကို ကောင်းစွာမမြင်တတ်ပါဘူး၊မြန်မာ ttkeyboard, BalckKeyboard ,Nexy keyboard တွေသွင်းပြီးလို့လဲ မြန်မာစာကို Safari Brower မှာ Error ပြပြီး မြန်မာစာကို ကောင်းစွာမမြင်ရပါဘူး၊ ဒီလိုဇောဂျီဖော့ကို မမြင်ရသုတွေအတွက် ဒီ http://shwe.co/zawgyi လေးကို download လုပ်ပြီး မိမိရဲ့ဖုန်းတွေမှာ သွင်းလိုက်ရင် မြန်မာစာကို Safari Browerမှာကောင်း စွာ မြင်ရ၊ဖတ်ရ၊ရေးလို့ရပါပြီ....
သတိထားရမှာက Zawgyi font ကို Install သွင်းတဲ့အခါမှာ Profile မှာ Verfied အစိမ်းရောင် ဖြစ်နေရပါမယ်၊ ဒါမှ font သွင်းတာအောင်မြင်တာပါ၊
ဖော့သွင်းတာအပေါ်က အောင်မြင်တာနှင့် အောက်က ဖော့သွင်းတာမအောင်မြင်တာကို နှိုယှဉ်ပြထား ပါတယ် ကြည့်လိုက်ပါအုံး...
အထူးသတိထားရမှက တချို့ zawgyi font ဗားရှင်းအဟောင်း တွေမှာ Error ပြတတ်တဲ့ အနီရောင်ပြရောင် Not Signed သွင်းတာ မအောင်မြင်ပါဘူး ဖျက်ပစ်လိုက်ပါ၊ ဥပမာ...http://bit.ly/ios8zawgyi အရင် iOS 8 မှာရတာ အခု 8.1 မှာ မမြင်ရတော့ဘူးလေ...
ကျွှန်တော်ကတော့ ttKeyboard တခုထဲသွင်းပြီးသုံးပါတယ်၊ ဒီတခုဘဲမြန်မာဇော်ဂျီလို ရိုက်ရသာ အဆင်ပြေဆုံးဆိုတာတွေ့ရလို့ပါဘဲ....ကဲ.. အပေါင်းအသင်းတို့စမ်းသုံးကြည့်လိုက်ကျပါအုံး....
Install ZawGyi font on iOS 8 (without jailbreak)
iOS 8 doesn't come with Myanmar Font. So, if you want to read Myanmar text in native app such as Facebook app, email and note etc.. you need to install ZawGyi font.
To install ZawGyi Font for iOS 8, visit the following link using safari browser. http://shwe.co/zawgyi
Figure (1) - Visit http://shwe.co/zawgyi using safari browser
Figure (2) - Click Install
Figure (3) - Click Install to install the font
Figure (4) - Click Done to close the screen and it will go back to safari.
That's all you need to do and ZawGyi font can be used by App.
Notification Message, iOS Mail App, Facebook App, Notes etc can show the text in Myanmar Language.
Posted by Ko Nge at Saturday, November 08, 2014